Indawo yokuhlala yaseThekkady
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguBasil
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uBasil iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Sikunika iklasi kunye nokuhlala okusemgangathweni eThekkady-ukuhlala ekhaya. Indawo yokuhlala ifumaneka kufutshane nePeriyar wildlife reserve. Unokuziva kwaye ubone indalo eninzi ngebalcony yethu ngokwayo. Igumbi ngalinye linegumbi lokuhlambela kunye ne-balcony. Usapho lwethu lusindleke le ndawo. Sinamagumbi ayi-4 kwaye onke akumgangatho wesibini. Sihlala kumgangatho wokuqala. Sibonelela undwendwe nge-Wi-fi yasimahla, indawo yokupaka kunye nenkonzo yethu enkulu. Sincedisa undwendwe lwethu ukuba lwazi ngendawo yasekuhlaleni eThekkady nakwiindawo eziyingqongileyo.
IThekkady Homestay ihlala eThekkady, eKerala. Isixeko sithathwa njengezulu leziqholo zendalo ezifana nepepile emnyama, icardamom, isinamon, i-nutmeg, i-nutmace, ijinja kunye ne-clove. Likhaya kwimihlambi yeendlovu, i-sambar, ingwe, i-gaur, i-lion-tailed macaques kunye ne-Nilgiri langurs. Ipropathi ijikelezwe ziintaba eziluhlaza kunye nechibi elihle. Indlela elula yokuthutha ukuya kwindawo yokuhlala iyafumaneka kwisikhululo seenqwelomoya saseCochin, kwisikhululo sikaloliwe saseKottayam kunye neSikhululo sebhasi.
Ihotele igcwele zonke izinto eziluncedo zale mihla njengedesika yangaphambili, iWi-Fi, inkonzo yegumbi, indawo yokuhlamba impahla, indawo yokupaka iimoto kunye nezinye ezifunekayo ukuze uhlale uphumle kwaye ukhululekile. Abasebenzi abaxhasayo bendawo yokuhlala baqinisekisa ukuba yonke iminqweno yeendwendwe izalisekiswa kwangethuba. Amagumbi abukekayo anobuhle kunye namagumbi anamhlanje athembisa iibhedi zelinen ezicocekileyo kunye nelinen ukongeza kwizixhobo ezifana newodrophu, igumbi lokuhlambela elincanyathiselweyo elinamanzi ashushu nabandayo kunye nezinto zangasese ezibalulekileyo.
Le ndawo yokuhlala yindawo efanelekileyo yokuphumla kunye nokuvuselela, kude nesiphithiphithi sobomi besixeko.
4.84 · Izimvo eziyi-61
Isandi segama elithi Thekkady sisenza umfanekiso weendlovu, imixokelelwane engapheliyo yeenduli kunye namasimi anevumba elimnandi. Kwihlathi lasePeriyar laseThekkady yenye yezona ndawo zibalaseleyo zogcino lwezilwanyana zasendle eIndiya kwaye isasazeke kuso sonke isithili kukho amasimi amahle kunye needolophu ezisezintabeni ezibambe amathuba amahle okuhamba kunye nokuhamba intaba.
Umbuki zindwendwe ngu- Basil
Siza kukunceda kwaye sikukhonze ngalo lonke ixesha uhlala kwindawo yethu yasekhaya. Likhaya lakho.